जनयुद्ध दिवसले उठाएका केही यक्ष प्रश्न - Jhilko
जनयुद्ध दिवसले उठाएका केही यक्ष प्रश्न
आ.... हा... त्यतिबेलाको त्यो स्पिड । कसैका हातमा पर्चा, कसैका हातमा पोष्टर, कसैका हातमा माड, कसैका हातमा इनामेल र ब्रस । कसैले देख्छ कि भन्दै बिरालोको चालमा लुपुक्क हिँडेर भित्ता खोजिन्थ्यो पोष्टर टाँस्नका लागि । पसलका सटरभित्र कुनै आवाज नआउने गरी पर्चा घुसाइन्थ्यो । घरको बार्दलीमा पुग्ने गरी ढुंगाका टुक्राहरु लोमेर पर्चा फ्याँकिन्थ्यो । इनामेल, कुचीसँग खेल्नेहरुलाई पालो बस्ने र सावधान तुल्याउँदै सडक, सार्वजनिक विद्यालयका पर्खालहरुमा नारा लेखिन्थ्यो । सबै बस्तु इतिश्री भएपछि भोक र थकाइले लखतरान हुँदै कसैका परालका थुप्राभित्र घुर्सेर श्वान निद्रा सुतिन्थ्यो । विहान कसैले नदेखोस् भन्दै झुसे अनुहार लिएर हाई..काड्दै डराइ डराइ गन्तब्यमा पुगिन्थ्यो । यस्तो थियो हाम्रो जनयुद्धको पहिलो दिनको रातचर्या । दिनचर्यामा भने हामी अनजानजस्तै बनेर अरुबाटै खबर सुन्थ्यौँ । २०५२ साल फागुन एक गतेको सानो अनुभूति हो यो ।
नेताहरुको स्कूलिंगले हामीलाईः हारे हत्कडी हातमा, जिते यो सिङगो सन्सार भन्ने सिकाएको थियो । मरे सहिदको माला, बाँचे हाम्रै हो रंगशाला भन्ने कुरा घोकाएको थियो । त्यसले हामीमा विशेष खालको ऊर्जा भरेको थियो । नेताहरुलाई फोटोमा देखे पनि ढोग्न मन लाग्थ्यो । मुट्ठी उचालेर लालसलाम गर्न मन हुन्थ्यो । एकपटक हात मिलाउन पाए अहोभाग्य सम्झन्थ्यौँ र कति दिनसम्म पनि शो जान्छ भनेर अरुलाई हात छुन दिन्नथ्यौँ । नेताजी आउँदै छन् रे भनेको सुनेपछि नाङ्गा खुट्टा र भोको पेटमा कार्यक्रमस्थलमा पुग्थ्यौँ । साम्राज्यवाद, बिस्तारवाद, घरेलु प्रतिक्रियावाद, सामन्तवाद, नवसंशोधनवादसँग घृणा उत्पन्न हुन्थ्यो । घृणा उत्पन्न हुने गरी ब्रेन वास नै गरेको थियो स्कूलिङले । जनयुद्धको विरोध गर्नेलाई आँखाले देख्न रुचाउँथेन ।
जनयुद्धको भट्टीमा आगो फुक्ने क्रम बढ्दै गयो । आगोमा फिलिङ्गाहरु थपिँदै गए । त्यो आगोको रापमा काँचो फलाम हाल्दा स्पात भएर निस्कन्थ्यो । मुट्ठी उचालेर जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै काममा जोतिन्थ्यो । हामी पनि जोतियौँ आफ्नो गच्छेअनुसार । यसरी जाँदै गर्दा हजारौँले छातीमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको गोली थापे । जेलका चिसा छिँडीमा आहत जीवन गुजारे । घर, परिवार, नातागोतामा केही दुर्घटना हुँदा पनि जान सक्ने अवस्था थिएन । कैयौँ महिलाहरु विधवा बने । अघोरी शासकका काला नंग्राले कैयौं युवती, नाबालिकाहरुका चोलीका तुना छिँदालिदिए ।
बलात्कारबाट रगताम्मे बने । अबैध आमा कहलिन बाध्य भए । बालबालिका टुहुरा भए । बाबुआमा साहाराविहीन भए । होनहार दशौँ हजार युवा युवतीको तातो रगत बगी नै रह्यो । गोलीका घाउबाट बगेका रगतमा लत्पतिएका मित्रहरुका घाइते शरीर उपचार नपाएर ढल्थ्यो । कैयौँ अपाङ्ग हुन्थे । यो अबस्थालाई शोकलाई शक्तिमा बदल्ने ऊर्जा मानेर अघि बढेको अवस्था हो । यस्तो कष्टकर जीवनको चलचित्र दिब्य दश बर्षसम्म यी आँखाले देखेका हुन् ।
जिते यो सिंगो संसार, बाँचे हाम्रै हो रंगशाला भनेर हिँडेका हामीहरुले अहिले के जित्यौँ ? सहिदहरुले के जिते ? घाइतेले के जिते ? टुहुरा बन्न वाध्य बालबालिकाले के जिते, बेपत्ताहरुले कुन चपरी मुनिको बास पाए ? नेता, कार्यकर्ता, योद्धाहरुलाई गाँस काटेर ख्वाउने, आफू सेण्ट्री बसेर बलिदानी बन्ने हिम्मत राख्दै नेताहरुलाई आफ्नो विछौनामा सुरक्षित सुताउने जनताले के पाए ? उही घरेलु प्रतिक्रियावाद, उही विस्तारवाद, उही सामन्तवाद, उस्तै सार, उस्तै रुप ।
हात्ती भने पनि गज भने पनि सार एउटै हुन्छ । श्वान भने पनि कुकुर भने पनि अर्थ एउटै हुन्छ । हामीले अहिले पाएको थोरै फरक भनेको हात्तीलाई गज भनिएको र कुकुरलाई श्वान भनिएको फरकमात्र पाएको हो । नाम फेरिए, पात्र फेरिए । सार फेरिएन । संस्कार फेरिएन । शोषक, सामन्त, सुदखोरहरुको बढोत्तरी नै भयो । जनता तातो ताबाबाट भुँग्रामा परेमात्र । बरु त्यसको साटो गाउँघरमा ऐँचोपैँचोमा पाइने लसुन अहिले साढे सात सय रुपैयाँ तिरेर एक किलो खान पाएका छौँ । तीन सय रुपैयाँ किलो प्याज र सय रुपैयाँ किलो आलु खाने सौभाग्य पाएका छौँ । त्यो पनि आयातित । कतिबेला अरु बढ्छ अनुमान छैन । हो, आम्दानी विनाको करको दायरा बढ््यो । जनताले उपभोग गर्ने हरेक चिजको मूल्य बढ्यो ।
समग्र देश र जनताको सुख, सुबिधा, सार्बभौम अधिकार, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी दिने भावकासाथ जनयुद्ध शुरु भएको थियो । त्यसमाथि उठेर सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा जनताको सत्ता, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपान्तरण, लिंगभेद, जातिभेद, बर्णभेदको अन्त्य, क्रान्तिको निरन्तरताको लागि सर्बहारा बर्गको अधिनायकत्वको भाव लिएर शुरु भएको थियो । युद्धले आफ्नो गति लिइरहेकै बेला, जनताले आफ्नो रगतको आहुती दिएर एउटा निश्चित गन्तब्यमा जाने अवस्था तुल्याइरहेकै बेला दिल्ली वार्ताले दिशा मोड्यो । कथित संयुक्त जनआन्दोलनको सहमतिले युद्धले धपक्क बलेको आगोको भट्टीमा पानी खन्याइदियो । भट्टी चिस्याइदियो । ऊर्जा सिथिल बनाइदियो । बन्दुकहरुमा खिया लागे । सत्ता जित्ने सपनामाथि टुकुचाको जल टाउका माथि छर्कने काम भयो । रणनीति कार्यनीतिमा परिणत भयो । अहिले त कार्यनीति पनि बाँकी रहेन । हजारौँ भोल्टेजको विद्युतीय फ्युज उडेर राजनैतिक फ्युजनमा झर्यो । सिद्धान्त, दर्शन, कार्यनीति, नेपाली जनयुद्धले स्थापित गरेको पथ (प्रचण्ड) सबै पथभ्रष्ट भए । उतिबेलाका प्रचण्डपथका कमाण्डर आज उही फेरिएको नयाँ नाम थरको प्रतिगामी÷यथास्थितिवादी चुनावको पछि दौडेका छन् । आफू र आफ्ना परिवारलाई चुनावमा जित्न र जिताउनका लागि धाँधली र गठबन्धनका चरहरु खोज्दै र फराकिलो बनाउँदै छन् । प्रतिगामीहरुमात्र हैन, विस्तारवादी र साम्राज्यवादीसँग सत्तामा बस्न पाउँ भन्दै घुँडा टेकेर धनुष बनेका छन् ।
उता अर्का सिद्धान्तकार बैद्य बा टालाटुली बटुली कति राम्री पुतलीको गीतमा रमाएका छन् । टाला बटुल्छन् । पुतली बनाउँछन् । पुतलीलाई साडी लगाइदिन्छन् । चोली भिराइदिन्छन् । त्यसैसँग खेल्छन् । अहिले पनि फेरि खिइएका, बुक्रा बारेर बसेका नौ दल बटुलेर पुतली बनाउँदै छन्ः लिम्पियाधुराको नक्सा सोझ्याउन र एमसीसी भगाउन । उनीसँग रहेको पुरानो दर्शन, सिद्धान्तका दिमागी पानाहरुमा धमिरा लाग्दैछ । मुसाले धुजाधुजा हुने गरी काट्दै छ । सार भन्ने चिज रहेन । रुपमा रमाउने बानी पार्दैछन् । अर्का बौद्धिक हस्ती, योजनाकार डा. बाबुरामको अन्तरमुखी स्वभावले पनि फड्को मार्ने, छलांग हान्ने, सर्पिल हैन, भ्यागुतोजस्तो फड्को मार्ने भन्ने अवस्था तुहियो । काँग्रेसी गठबन्धनको आधारमा जितेको सांसदको सिरक ओढेर भत्ता बुझ्दै गोडामा... न्यानोको अत्मरति लिँदैछन् । हिउँदमा जाडो हुन्छ । गर्मीमा पसिना आउँछ । बर्षामा पानीले भिजाउँछ । कतिबेला उनको दिवासपनाको संगठन बन्छ र राजनीतिले छलाङ हान्छ ? अर्का बाबुसाहेब नेत्र विक्रम चन्दले पनि सहिदको खेती गर्ने र त्यही खेतको फसल काटेर खाने बाहेक अर्को उपलब्धी देखिएको छैन । सत्ता बार्गेनिंगको लागि उनको हुँकार हो भन्ने धेरैतिरबाट पुष्टिँदै छ ।
जनयुद्धका यी हस्तीहरु सेलाएपछि जनयुद्धको सार र मर्म सेलाउने नै भयो । सत्ता कब्जाको रणनीति अहिले अर्थ कब्जामा सिमटियो । करोडौँ नेपाली जनताको बुद्धि भुटेर जनयुद्धलाई यसरी नाम, थर फेरिएको प्रतिक्रियावादी कित्तामा मिसाएर टुकुचा बनाउनु थियो त किन शुरु गरियो ? त्यत्रा मानिसलाई अकालमा किन मारियो ? नेपाली जनक्रान्तिको जाज्वल्यमान इतिहास खडा गरेको ओजपूर्ण झण्डालाई किन मुसालाई ओछ्यान बनाउन सिंहदरबारका कुनामा फालियो ? त्यसको स्पष्टीकरण दिने हिम्मत छ ? यो आजको जनयुद्ध दिवसले उठाएको यक्ष प्रश्न हो । जनयुद्धसँग जोडिन पुगेका रामे, श्यामे, हरि, महेश, आइती, मंगली, देबकी चुनमायाँ आदिको मन, मस्तिष्कमा सुल्झनै नसकेको प्रश्न हो । उत्तर कसले देला प्रतिक्षा गरौँ ।
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ सय नाघ्यो, एकै दिन २४२ को मृत्यु
चन्दा असुल्दै गर्दा बिप्लबका प्रदेश ब्युरो सदस्य साह पक्राउ
दक्षिण सिरियामा इजरायलको आक्रमण
सिरियाको दक्षिण भागमा पर्ने दराआ प्रान्तमा बुधबार इजरायलले आक्रमण गरेको राज्यद्धारा...
विप्लव समूहमा संलग्न भई विभिन्न गैरकानूनी क्रियाकलापमा लागेको भन्दै दुवै जनालाई...
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार मृत्यु हुनेमा रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर...
रेष्टुराँले १८० प्रहरी, कोभिडको उपचार केन्द्र टेकु अस्पताल र प्रयोगशाला रहेको शुक्रराज...